ဖူးခက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
222 Tambon Mai Khao, Amphoe Thalang, Phuket, Thailand
၈၂ ပေ / ၂၅ မီတာ
09/27 3,000 ၉,၈၄၃ Asphalt
Sources: Airport A.O.T., DAFIF
ဖူးခက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် (Thai: ท่าอากาศยานภูเก็ต) (IATA: HKT, ICAO: VTSP) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးခက်ခရိုင်အတွင်း တည်ရှိသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဖူးခက်ကျွန်း၏ မြောက်ဘက် ၃၂ ကီလိုမီတာ (မိုင်၂၀) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ဖူးခက် လေဆိပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အဓိက ကျသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ် နှင့် ဒွန်မောင်း လေဆိပ် ပြီးလျှင် တတိယ ခရီးသည်အများဆုံးလေဆိပ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ခရီးသည် ၁၁.၃ သန်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပမာဏသည် ၂၀၁၂ ကထက် ၁၈.၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
၂ လေကြောင်းလိုင်း နှင့် ပျံသန်းရာမြို့များ
၃ ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
၃.၁ ခရီးသည် အရေအတွက်
၃.၂ လေယာဉ် အရေအတွက်
၃.၃ ကုန်ပစ္စည်း (တန်ချိန်)
၃.၄ လူသွားအများဆုံး ခရီးစဉ် (ပြည်ပ)
၃.၅ လူသွားအများဆုံးခရီးစဉ် (ပြည်တွင်း)
လေဆိပ်တွင် လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၂) ခု တည်ဆောက်ထားရှိသည်။ လေဆိပ် အဆောက်အဦး (၁) မှာ ပြည်ပ ခရီးစဉ်အတွက် ဖြစ်ပြီး လေဆိပ်အဆောက်အဦး (၂) မှာ ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်အတွက် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စီးလုံးငှား လေယာဉ်အတွက် လေဆိပ်အဆောက်အဦး (အိပ်စ်) ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ခရီးသည် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ပိုမိုများလာခြင်းကြောင့် လေဆိပ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်း စီမံကိန်း လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်မှာ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၅.၁၄ ဘီလီလျံ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်သည်။
လေဆိပ်သည် ပင်လယ်ပြင်မျက်နှာပြင်အထက် ၈၂ပေ (၂၅ မီတာ)တွင် တည်ရှိသည်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းမှာ မီတာ ၃၀၀၀ ရှည်လျား၍ ၄၅ မီတာ အကျယ် ရှိသည်။ 
လေဆိပ်ဖွင့်ချိန် : ၀၆:၀၀ - ၂၄:၀၀
လေယာဉ်ပြေးလမ်း : 09/27, 3,000 metres long and 45 metres wide. An additional runway is under consideration.
: တစ်နာရီလျှင် အစီး ၃၀
လေယာဉ် ရပ်နားရန် နေရာ
လေယာဉ်ဆင်းသက်ဂိတ်ဖြင့် (၂) နေရာ
လေယာဉ်ရပ်နားရန် (၅) နေရာ
လေကြောင်းလိုင်း နှင့် ပျံသန်းရာမြို့များ[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန်
Aeroflot Seasonal: Moscow–Sheremetyevo 1
Air China ပေကျင်း-မြို့တော် 1
AirAsia ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 1
Asiana Airlines ဆိုးလ်-အင်ချွန် 1
ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ချင်းမိုင်၊ ဟိုက်ရိုင်၊ Ko Samui, ပတ္တရား-ဦးသဖောင် 2
Beijing Capital Airlines Sanya 1
Business Air Charter: ဆိုးလ်-အင်ချွန် 1
China Eastern Airlines Chengdu, Hangzhou, ကူမင်း၊ Ningbo, Xi'an 1
China Southern Airlines Changsha, Guangzhou, Nanning, Shenzhen, Guiyang 1
Chongqing Airlines Chongqing 1
City Airways ဟောင်ကောင် 1
Dragonair ဟောင်ကောင် 1
Eastar Jet ဆိုးလ်-အင်ချွန် 1
Edelweiss Air Seasonal: Zürich 1
အဲမရိတ် လေကြောင်းလိုင်း Dubai–International 1
operated by SunExpress Deutschland Cologne/Bonn 1
Firefly ပီနန် 1
Hainan Airlines ပေကျင်း-မြို့တော် 1
HK Express ဟောင်ကောင် 1
Jeju Air ဆိုးလ်-အင်ချွန် (begins 8 September 2016) 1
Jetstar Asia Airways စင်ကာပူ 1
Juneyao Airlines ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ Zhengzhou 1
Korean Air ဆိုးလ်-အင်ချွန် 1
Lucky Air ကူမင်း 1
မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 1
နော့ လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ Chengdu 2
Nordwind Airlines Seasonal Charter: Irkutsk,Khabarovsk, Krasnoyarsk–Yemelyanovo, Mineralnye Vody, Novosibirsk, St Petersburg, Vladivostok 1
Orient Thai Airlines ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း
Charter: Denpasar/Bali 2
R Airlines ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း 2
Shandong Airlines Changsha, Jinan, Qingdao, Xiamen 1
Shanghai Airlines ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း 1
Shenzhen Airlines Chengdu, Shenzhen 1
ဆစ်အဲ လေကြောင်းလိုင်း စင်ကာပူ 1
Spring Airlines ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ Yangzhou 1
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ဟောင်ကောင်၊ ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ စင်ကာပူ၊ Wuhan 1
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ ချင်းမိုင်၊ Udon Thani 2
Thai Airways Hong Kong
Seasonal: Copenhagen, Perth, Stockholm–Arlanda 1
ထိုင်းလိုင်းရင်း လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း 2
ထိုင်းစမိုင်း လေကြောင်းလိုင်း ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း၊ ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ချင်းမိုင် 2
Thomson Airways Charter: Copenhagen (begins 13 December 2016), London–Gatwick, Helsinki (begins 12 December 2016), Manchester (begins3November 2016), Stockholm–Arlanda 1
Tianjin Airlines Chongqing, Tianjin 1
Tigerair စင်ကာပူ 1
TUIfly Nordic Charter: Billund, Copenhagen, Gothenburg–Landvetter, Helsinki, Malmö, Oslo–Gardermoen, Stockholm–Arlanda 1
XiamenAir Xiamen 1
2015 5,900,000 6,950,000 12,900,000 12.8
လူသွားအများဆုံး ခရီးစဉ် (ပြည်ပ)[ပြင်ဆင်ရန်]
Busiest international routes to and from Phuket Airport (2014)
1 စင်ကာပူ 935,137 2.4
2 ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 703,794 4.8
3 Hong Kong 587,553 0.1
4 ဆိုးလ်-အင်ချွန် 501,710 18.5
5 ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း 432,073 34.7
6 Chengdu 268,491 4.1
7 Chongqing 236,937 9.9
8 Moscow-Domodedovo 207,297 6.8
9 Dubai 203,884 19.7
10 Abu Dhabi 171,591 4.6
Busiest domestic routes to and from Phuket Airport (2014)
1 ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ 2,364,184 6.8
2 ဘန်ကောက်-ဒွန်မောင်း 1,983,655 11.3
3 ချင်းမိုင် 318,728 3.5
4 Samui 163,164 1.4
5 Udon Thani 103,451 0.9
6 Rayong and Pattaya 34,772 1.7
7 Surat Thani* 6,007 79.2
8 Songkhla-Hat Yai* 161 1.3
9 Nakhon Si Thammarat* 143 new
10 Krabi* 136 71.6
↑ Phuket International Airport
↑ AOT Investors Site။ 27 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 Jan 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Aero Data ရှိ VTSP အတွက် လေဆိပ် အချက်အလက်များ။ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆ အရ။ ရင်းမြစ်: DAFIF.
↑ Airport information for HKT at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective October 2006).
↑ "Thailand, Singapore seen as top expat locations"၊ Investvine.com၊7February 2013။ 19 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Airport information for VTSP at World Aero Data.
↑ Jeju Air Adds Phuket Service from Sep 2016။ routesonline။ 29 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Airlineroute :: Routesonline
↑ Spring Airlines Expands International Flights from July 2016။ routesonline။ 10 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Thomson Airways Schedules Boeing 787-9 W16 Nordic Operations :: Routesonline
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ "AoT airports set new record in passenger traffic"၊ Bangkok Post၊ 2016-02-01။ 1 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Airport of Thailand Public Company Limited၊ Corporate Strategy Department (2015)။ Air Transport Statistic။ Airport of Thailand Public Company Limited။ 28 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Airports of Thailand Public Company Limited၊ Corporate Strategy Department (2015)။ Air Transport Statistic။ Airports of Thailand Public Company Limited။ 28 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖူးခက်_အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ_လေဆိပ်&oldid=632252" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။